Ciraadka Xadhiga ee Caaqilada Ogadeen Car Yaa Sheega? – Rasaasa News
Ciraadka Xadhiga ee Caaqilada Ogadeen Car Yaa Sheega?
Mar 18, 2012 Ciraadka Xadhiga ee Caaqilada Ogadeen Car Yaa Sheega?
Jijiga, Mar 18, 2012 [ras] – Madaxweynayaasha qabta talada madaxtinimda dawlada degaanka Somalida Ethiopia, ma waxaa jira faal u sheega in ay xidhaan cuqaasha u dhalatay degaanka Somalida Ethiopia?
Cuqaashu waa hogaamiyeyaasha dhabta ah ee dadka Somalida, nidaamka dawladnimo ka horna waxay ahaayeen hogaanka bulshada, iyaga oo ku hogaamin jiray xeer dhaqameed cadaalad ah. Cuqaashu wali waa hogaanka bulshada, wuuna jiri doonaa.
Nidaamka dawliga ah iyo diinta Islaamka midkoodna ma diidana hogaan dhaqameedka cadaalada ah ee cuqaasha. Xukuumadaha milatariga ah iyo maamulada musuqa ku dhisan waxay neceb yihiin cuqaasha iyo cadaadalada.
Hadaba, maamulada soo mara degaanka Somalid Ethiopia milatari ma aha, waxayna masuuliyiinta madaxda ka noqta degaanka dhamaantood ka siman yihiin nacaybka cuqaasha degaanka Somalida. Arinkaas oo aan ku haboonayn.
Cabdulahi Xasan Lugbuur, wuxuu xidhay oo dalka ka geeyey Ugaas Cabdiraxmaan Ugaas Muxumed Ugaas Qani 2008, oo haatan qaxooti ku ah Yurub, Cabdulahi lugbuur wuxuu maanta qaxooti ku yahay Newzeland. Madaxweynayaashii isaga ka horeeyeyna dhibkaas oo kale ayey Cuqaasha u gaysteen.
Madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar, waxaa maanta ag joogta ergada Ugaas Maxamuud Duulane. Waxaa la sugi in isaga iyo Ugaasku ay garbo dhac noqdaan.
Dhagayso codadkan, dabadeedna jawaab na soo sii, hadaad fahamsan tahay sababta loo xidho cuqaasha degaanka Somalida Ethiopia, adiga oo aan siyaasadaynin.
Dhagayso Codkan [mp3player width=200 height=20 config=fmp_jw_widget_config.xml file=http://rasaasa.com/lugcabdi.mp3]
Ethiopia oo Weerartay Xeryo Mucaaradkeedu ku Leeyihiin Eritrea
Tababar ku Saabsan Barashada Xuquuqda Dadweynaha oo ka Furmay Jijiga